Androy : olona 10 000 tohanana ara-tsakafo | NewsMada
Hitohy hatramin’ny volana febroary ny fandraisana an-tanana ny vehivavy mitondra vohoka 10 000 sy zaza latsaky ny 5 taona tratran’ny tsy fanjarian-tsakafo, nanomboka ny volana novambra lasa teo any amin’ny faritra Androy. Nisy ny fizarana fanampin-tsakafo Plumpy Sup (ahitana voanjo, siramamy, menaka, proteine azo avy amin’ny soza ary ronono) ary serealy notovonana vitamine sy singa mineraly maro. Nanohana ara-bola ny asan’ny Fandaharanasan’ny Firenena mikambana momba ny sakafo (Pam) ny USAID amin’ny sorabola 2 tapitrisa dolara. Nahafahana nisoroka ny krizy ara-tsakafo any atsimo io fanampiana azo io. Mety hitarika amin’ny fahafatesana ny tsy fanjarian-tsakafo mahazo ny zaza madinika sy ny reny mitondra vohoka, araka ny fanambaran’ny solontenan’ny Pam eto amintsika, Willen van Milink.
Refesina tsy tapaka ny toe-pahasalaman’ny mpahazo tombontsoa ary omena torohevitra momba ny sakafo ara-pahasalamana izy ireo. Alefa haingana eny amin’ny tobim-pahasalamana ny zaza voatily fa tratran’ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika.
Taorian’ny fitiliana natao, ny volana avrily 2015, voan’ny tsy fanjarian-tsakafo ny zaza 12 amin’ny 100 amin’ny kaominina sasany tafakatra 30 amin’ny ankizy 100 izany. Mamely ny mponina any amin’ny distrikan’Amboasary, Tsihombe, Beloha ary Betioky ny tsy fahampiana ara-tsakafo vokatry ny haintany.